Iyo itsva vhezheni yeReactOS 0.4.9 yave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura ReactOS timu yekuvandudza yakazivisa kuburitswa kweshanduro nyowani yeiyo yako inoshanda system iyo iyo system inosvika neshanduro yayo nyowani ReactOS 0.4.9.
Mune iyi vhezheni itsva yeReactOS 0.4.9, Ivo vanotipa isu nekuvandudzwa kutsva uye kugadzirisa kwakatenderedza vhezheni yavo yapfuura uye pamusoro pezvimwe zviitiko zvitsva zvatinogona kudzidza nezvazvo pazasi.
1 Nezve ReactOS
2 Nyowani vhezheni yeReactOS 0.4.9.
3 Dhawunirodha ReactOS 0.4.9.
Kune avo vevaverengi vedu vasati vachiziva ReactOS Ini ndinogona kukuudza kuti iyi yakavhurika sosi inoshanda sisitimu yePC x86 / x64 yakagadzirirwa kuita bhanari inoenderana nemapurogiramu emakomputa uye madhiraivha edhizaini akagadzirirwa Microsoft Windows Server 2003.
Naizvozvo, Izvo zvakakosha kuratidza uye kunzwisisa panguva ino kuti ReactOS haisi sisitimu inoshandisa iyo Linux Kernel, Iyo sisitimu yakagadzirwa kubva pakutanga iyo inotevera iyo FLOSS modhi yekuvandudza seimwe nzira kune Windows.
Sisitimu yekuvandudza yakatanga senge Windows 95 dombo, iyo yakamiswa mukutanga kwa1998 seReactOS, uye yakaenderera mberi nekubatanidzwa zvishoma nezvishoma kwezvinhu kubva kuzvazvino vhezheni zveWindows.
ReactOS Inonyanya kunyorwa muC yemutauro mutauro, ine zvimwe zvinhu, senge ReactOS Explorer uye ruzha stack, yakanyorwa mumutauro weC ++. Iyo purojekiti inovimba neMinGW yekusanganisa, uye kuvandudzwa kwayo kunopihwa kuburikidza nekuratidzwa kwezvimedu kune izvo zvikamu.
Muchidimbu, uye izvo zvakagovaniswa nevagadziri vayo, iyo sisitimu inonyanya:
Chinangwa chikuru cheiyo ReactOS chirongwa ndechekupa iyo inoshanda sisitimu inoenderana neWindows… nenzira yekuti vanhu vaishandisa kune vanojairika Windows mushandisi interface vaizozviwana zviri nyore kushandisa ReactOS. Chinangwa chekupedzisira cheReactOS kubvumira Windows kuti ibviswe uye ReactOS iiswe pasina mushandisi wekupedzisira aona shanduko.
Nyowani vhezheni yeReactOS 0.4.9.
En iyi nyowani vhezheni yeReactOS 0.4.9 isu tinogona kuwana akateedzana ekuvandudza uye kunyanya kururamisa kwakabatanidzwa mune iyi vhezheni itsva.
Pakati pehunhu hukuru hwatinogona kuratidza, tinogona kuona kuti system shell yakagadziridzwa neapi mafaera eZIP anogona kubviswa kubva kuhurongwa faira maneja.
Kugadzikana kwesystem kwakavandudzwa, sezvo yaishanda pabhodhoro rekudonhedza zviwanikwa zvinokonzerwa neiyo FastFAT mutyairi iyo yaive neakawandisa kuvhunduka kwezviwanikwa nekuda kwekukakavadzana neyemaneja manejimendi, yakajairika cache, iyo hardware abstraction layer (HAL).
Kumwe kusimudzira kunozivikanwa muFastFAT ndiko kunyorazve rutsigiro rwevhoriyamu dzakakuvara iyo inoderedza zvakanyanya mukana wehuori hwefaira. Nguva yega yega vhoriyamu yakakanganiswa painoonekwa panguva yebhutsu "chkdsk" inotangisa kugadzirisa pane iwo mavhoriyamu.
Uyewo ikozvino zvinogoneka mushanduro yedu nyowani yekukwanisa kudhonza maforodha nekuakanda kune imwe nzvimbo, neizvi isu ticharatidzwa menyu yemamiriro ekutibvunza isu danho rekutora, kungave kuteedzera dhairekitori, kufambisa folda kana kugadzira kuwana kwakananga.
Mune ReactOS 0.4.9 setup chirongwa. dialog nyowani yakawedzerwa, pamwe nekutangisa nekumisa masevhisi, maneja wedhizaina uye musanganisi wezwi wakagadziridzwa kuitira kusimudzira kugona kwavo uye kugadzikana.
Finalmente tinogona kuratidza kuti kuenderana kweWindows zvinoshandiswa nesystem kwakagadziridzwa, sezvo iyi vhezheni itsva ichipa maraibhurari akasiyana nemaAPIs, ayo anotendera mukana weReactOS kuzviratidza seWindows 8.1.
Dhawunirodha ReactOS 0.4.9.
Kana iwe uchida kuyedza iyi inoshanda system, unogona kuwana mufananidzo weiyo system nekuenda kune yepamutemo webhusaiti yeiyo purojekiti uye muchikamu chekurodha chepeji iwe raunowana. iyo download download yeiyi nyowani vhezheni yesystem.
Muchikamu chino tinogona kuwana iyo system mushanduro mbiri dzakasiyana, imwe yacho iri inozivikanwa bootcdy LiveCD.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo nyowani vhezheni yeReactOS 0.4.9 yave kuwanikwa
OCS-Chitoro: chitoro chakabatana chematimu, maikoni, zvinoshandiswa uye zvimwe zveLinux